Ministeran’ny rano Hanampy ny kaominina amin’ny fanadiovana an’Antananarivo
Hanampy ny kaominina Antananarivo renivohitra amin’ny fanadiovana ny tanana manerana ny Boriborintany enina ny Ministeran’ny rano, tarihin’ny minisitra Roland Ravatomanga.
Ankoatra ireo kamiao lehibe 11 isa mahazaka fako 20 taonina isanisany efa tonga ary noraisina teny amin’ny SAMVA Ampasampito mantsy dia fantatra ihany koa fa ho avy tsy ho ela ireo kaominina lehibe miisa dimy mahazaka fako 25 ka hatramin’ny 30 taonina isanisany. Ny mba hahafahana manampy ny kaominina Antananarivo renivohitra amin’ny fanadiovana ny tanàna no nambaran’ny minisitra Roland Ravatomanga fa anisany anton’izany no sady hahafahana miady amin’ny aretina Pesta ihany koa. Hiampy ireo daban-jaoridira vaovao miisa 51 haparitaka eto an-drenivohitra ireo kamiao ireo koa miantso ny mponina tsy an-kanavaka ity Minisitra iray ity mba hanaja ilay ora fanariana fako eto an-drenivohitra efa napetraky ny kaominina. Fa tsy adinon’ny minisitra ny resaka famatsiana rano fisotro madio amin’ny maha-ministry ny rano azy. Hanohy ilay tetikasany efa nanomboka tamin’ny taona 2016 entina hamatsiana rano fisotro madio ireo mponina any amin’ny Faritra atsimon’ny Nosy ny minisitry ny rano Roland Ravatomanga. Hitohy hatramin’ny taona 2019 izany raha araka ny fanazavany mba hahafahana mampitombo ny salan’isan’ireo mponina mahazo rano fisotro madio eto amintsika. Efa eo am-pitadiavana ny vola ho enti-manana amin’izany ity ministera iray ity raha araka ny fantatra. Tsiahivina moa fa mankalaza ny faha-10 taona nijoroany ny ministeran’ny rano ankehitriny. Hetsika maro no entin’izy ireo hanamarihana izany izay nosantarina tamin’ny fizarana Kits scolaire ho an’ireo zanaky ny mpiasa eo anivon’ity ministera iray ity ny Talata hariva lasa teo.